M bi n'ihe m dere. \_ "Nicole na -atụ ugbu a na-eme ụlọ na eriri maka nnukwu ụmụ nwanyị. O nwere nnukwu ọfụma, ọ na-ezube ịchebe ya nke ya na mkpokọta. \_" Enwere m Nkwado ụmụ nwanyị niile, ọkachasị ebe m malitere iji ezigbo nwanyị dị iche iche, nha na ogo m na-egosi maka onwe gị, ọ ga-amatakwa onwe gị ka ọ bụrụ na ọ dị nnukwu ara na ịgbalịsi ike Maka bra nke dabara, na-ele anya ma nwee mmetụta dị ukwuu.
Kpoo akpa mgbe ịzụrụ anụ. Onye na-egbu anụ ahụ nwere ike ịtụle anụ ahụ tupu itinye ya n'ime akpa ahụ, nke bụ ụzọ dị mfe iji belata ojiji nke akpa rọba. Jiri akwụkwọ akụkọ bulie bin na akwụkwọ akụkọ. Fọdụ na-echegbu onwe ha maka iji plastik na-eme ka a na-abawanye ahịa nke biine liners, mana nke a abụghị ikpe.
Site na ndapụta HCBS, ha nwere ike igbochi nhọrọ nke ọrụ maka ebumnuche ebumnuche site na nyocha, nkwarụ na / ma ọ bụ mpaghara ala. N'ihi na, site na nkọwapụta, PC nhọrọ nhọrọ nhọrọ dịịrị ndị mmadụ niile ruru eru na steeti enyere, ọ na-abụkarị obere, usoro ndị ọzọ iji nweta nlekọta nke onwe ya.